LUUQADAHA LTU International Airways Fleet FSX & P3D - Rikoooo
downloads 84 223
Dhufsanayaasha qorayaasha, repack by Ricardo_tv, xoojinaya Rikoooo
Rikoooo bandhigaysaa raxan ka mid ah diyaaradaha LTU (Lufttransport-Unternehmen for "shirkada gaadiidka hawada") taas oo 2009 ku biireen Air Berlin. pack Tani waa a edition gaar ah ee xasuusta of waxa jiray shirkad ka 1955 in 2009.
Baro iyo duuli 10 diyaaradda taariikhi ah in ay ka kooban raxan LTU tan 1955, ka L-1011 Lockheed ku TriStar at A320 Airbus ah iyada oo Bae 146-200, oo dhan, kuwaas oo diyaarad shidmayo riyadii ee la soo dhaafay sharaf badan. Diyaarad kasta waxay u bixiyeen in xirmadan ku qalabeysan yahay a qol dalwaddii tayada functional iyo guddi 2d. Sidoo kale, caadadii codadka for model salaysan kasta matoorada.
Xirmadan ayaa la tijaabiyay oo loo oggolaaday FSX-SP2 iyo Dardar-gelinta & Prepar3D v1, waxay u badan tahay inuu la jaan qaadayo nooca 2 ee Prepar3D iyo noocyo kale oo ah FSX, tijaabooyinkaaga samee.
Thanks to qorayaal freeware kala duwan waxaa ka mid ahaa in qorshahan ay shaqo wayn.
List of diyaarad la photo bannaanka iyo gudaha:
Author: Qorayaal badan, oo ay dib u soo celiyaan Ricardo_tv, oo kor u qaaday Rikoooo